ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ Disney ရုပ်ရှင်ကားတွေအခြေတည်ရာ ကြေကွဲဆို့နင့်ဖွယ် မူရင်းဇာတ်လမ်းများ - CantWait2Say
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ Disney ရုပ်ရှင်ကားတွေအခြေတည်ရာ ကြေကွဲဆို့နင့်ဖွယ် မူရင်းဇာတ်လမ်းများ
Disney Animation ရုပ်ရှင်တွေထဲက ဇာတ်ကောင်တွေဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးတွေ၊ မင်းသားတွေဖြစ်ပြီး အဆုံးမှာ ပျော်ရွှင်စရာ ဇာတ်နဲ့ သိမ်းသွားတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီ Story စတင်ဖြစ်ပေါ်လာရာ အကိုးအကားဇာတ်လမ်း တွေကတော့ ချိုမြိန်ချင်မှ ချိုမြိန်တာပါ။
Rapunzel ရဲ့ ဇာတ်လမ်း အစစ်အမှန်
ဆံရှည်မလေး Rapunzel ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ Grimm ညီအစ်ကိုများရေးတဲ့ နတ်သမီး ပုံပြင်တွေကို အခြေခံတာပါ။ မူရင်းဇာတ်လမ်းမှာ စုန်းမကြီးဟာ Rapunzel နဲ့ မင်းသားအကြောင်းသိသွားတဲ့ အခါမှာ Rapunzel ရဲ့ ဆံပင်တွေအားလုံးကို ညှပ်ပစ်ပြီး ပြတင်းဝမှာ တန်းလန်းချထားပါတယ်။ မင်းသားက အမှတ်မထင် ဆွဲလိုက်မိတဲ့အခါမှာ ဆံပင်တွေနဲ့အတူ ဆူးပုံပေါ် ခြေချော်ကျပြီး မျက်လုံးကွယ်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုမှ Rapunzel က မျက်ရည်တွေနဲ့ ကုသပေးခဲ့တာပါ။
Little Mermaid ဆိုတဲ့ကားကတော့ Hans Christian Andersen ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက ပုံပြင်ပါ။ ကားထဲမှာ ရေသူမလေးက သူ့ချစ်သူမင်းသားလေးနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဇာတ်သိမ်းသွားတယ်လို့ ပါပါတယ်။ မူရင်းပုံပြင်မှာတော့ သူကယ်ခဲ့တဲ့ မင်းသားလေးဟာ အခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန် ရေသူမလေးက အသဲကွဲပြီး သူ့ကိုယ်သူ ပင်လယ်ထဲ မြှောနေလိုက်တာ နောက်ဆုံး ပင်လယ်ရေမြှပ်တွေ ဖြစ်သွားတဲ့အထိပါပဲတဲ့။
Moana ဟာ Maui ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို အခြေခံထားတာပါ
Moana ဇတ်ကောင်ကကျတော့ အပြင်မှာ Polynesia ဆိုတဲ့ မြို့ကို ဇာတ်လမ်းရေးသူရောက်သွားတုန်းက တွေ့ခဲ့တဲ့ Maui ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို အခြေခံထားတာပါ။ အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းမှာ Polynesian မျိုးနွယ်တွေရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေအကြောင်း တော်တော်များများထည့်သွင်း ရေးဖွဲ့ထားပါသေးတယ်။
မူလန်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေခဲ့တာပါ
သတ္တိရှိပြီး ရဲရင့်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စစ်သူရဲကောင်းမလေး မူလန်ရဲ့ ဇတ်လမ်းကို ကြည်ပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ စိတ်ခွန်အားတွေ တက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူလန်ဇာတ်လမ်းရဲ့ ဗားရှင်းနောက်တစ်ခုမှာတော့ မူလန်ဟာ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားလေသတည်းလို့ ဆုံးသွားပါတယ်။ ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုး စစ်ထွက်ပြီး မူလန် ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့ သူ့အဖေကလည်းသေ၊ သူတို့မိသားစုကလည်းကွဲ၊ နောက်ဆုံး အထီးကျန်မှုဝေဒနာနဲ့ သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်ခြင်းတွေကို မရပ်တန့်နိုင်လို့ မူလန်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေသွားပါတယ်တဲ့။
Snow White ကားထဲက စုန်းမကြီးဟာ ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်
Snow White ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းထဲမှာ စုန်းမကြီးဟာ ကျောက်တုံးပိသေသွားတာဖြစ်ပေမယ့် မူရင်းဇာတ်လမ်းမှာတော့ မင်းသားလေးနဲ့ snow white တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ရောက်လာတဲ့ စုန်းမကြီးကို မင်းသားလေးက ပူနေတဲ့ သံဖိနပ်ကြီး ၀တ်ခိုင်းပြီးတော့ မသေမချင်း ကခိုင်းခဲ့တာပါ။
Elsa ဟာ လူကောင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး
Frozen ရဲ့ဇာတ်လမ်းကလည်း Hans Christian Andersen ရေးတဲ့ နတ်သမီးပုံပြင်များကို အခြေခံထားတာပါ။ Disney က ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Elsa ကချစ်ဖို့ကောင်းပေမယ့် မူရင်းဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ စုန်းမကြီးပါ။ သူဟာ သူ့ကိုယ်ပိုင် ရေခဲနန်းတော်ထဲမှာ အထီးကျန်စွာ နေရင်း Kay ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး ဖမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ Kay ရဲ့သူငယ်ချင်း Gerda က Kay စုန်းမကြီး လက်ထဲကနေ စွန့်စွန့်စားစား ပြန်ကယ်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
“Beauty and the Beast” ဟာ ဖြစ်ရပ်မှန် ပြင်သစ်ဇာတ်လမ်းပါ။o
Beauty and the Beast မူရင်းဇာတ်လမ်းကို Gabrielle-Suzanne de Villeneuve ရေးခဲ့တာပါ။ သူဟာ အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းကို Pedro နဲ့ Catherine ဆိုတဲ့ အပြင်မှာတစ်ကယ်ရှိတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ကို အခြေခံရေးဖွဲ့ထားတာပါ။ လက်တွေ့ဘ၀မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Pedro ဟာ ရှားပါးအရေပြားရောဂါတစ်မျိုးရပြီး တစ်ကိုယ်လုံး အမွေးတွေ နေရာလပ်မကျန်အောင် ပေါက်နေသူပါ။ မိန်းမဖြစ်သူ Catherine ကတော့ ချောမောပြီး လက်မထပ်ခင်အထိ သူ့ယောက်ျားဟာ အဲ့ဒီလိုလူမျိုးဆိုတာ မသိပါဘူး။ Disney ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါင်းဖက်ကြလေသတည်းပါပြီး လက်တွေ့မှာလည်း ကလေး ၇ ယောက်အထိ ရသွားတယ်ဆိုတော့ ပုံပြင်နဲ့ လက်တွေ့ သိပ်မကွာဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Sleeping Beauty ဆူးဆူးရခြင်း အကြောင်းအရင်း
Sleeping Beauty ဇာတ်လမ်းကတော့ ၁၆ ရာစုနှစ်ကတည်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ Disney ရဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ မင်းသမီးလေး Zellandine က မင်းသား Troylus နဲ့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီး စုန်းမကြီးရဲ့ ဆူးတွေကြောင့် အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ မူရင်းဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ Zellandine က ကိုယ်ဝန်ရပြီး ကလေးမွေးလိုက်ပါသေးတယ်။ သူမွေးတဲ့ ကလေးက ဆူးကို ရှာတွေ့သွားတာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီဆူးနဲ့ ထိမိလို့ အိပ်ပျော်သွားတာပါ။
9.Pocahontas ဟာ John Smith နဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ မချစ်ကြိုက်ခဲ့ပါဘူး
Pocahontas ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်က 1595 ခုနှစ်မှာမွေးတဲ့ တကယ့်ဇာတ်ဆောင်ပေါ်မှာအခြေခံထားတာပါ။ Disney ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Pocahontas ဟာ အင်္ဂလိပ် သင်္ဘောသား John Smith နဲ့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ သမီးရည်းစားတွေ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ Pocahontas ဟာ အင်္ဂလိပ် စစ်သားတွေရဲ့ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး အသက် ၂၁ နှစ်မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ Disney ရုပျရှငျကားတှအေခွတေညျရာ ကွကှေဲဆို့နငျ့ဖှယျ မူရငျးဇာတျလမျးမြား
Disney Animation ရုပျရှငျတှထေဲက ဇာတျကောငျတှဟော ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ မငျးသမီးတှေ၊ မငျးသားတှဖွေဈပွီး အဆုံးမှာ ပြျောရှငျစရာ ဇာတျနဲ့ သိမျးသှားတာခညျြးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ Story စတငျဖွဈပျေါလာရာ အကိုးအကားဇာတျလမျး တှကေတော့ ခြိုမွိနျခငျြမှ ခြိုမွိနျတာပါ။
Rapunzel ရဲ့ ဇာတျလမျး အစဈအမှနျ
ဆံရှညျမလေး Rapunzel ရဲ့ ဇာတျလမျးကတော့ Grimm ညီအဈကိုမြားရေးတဲ့ နတျသမီး ပုံပွငျတှကေို အခွခေံတာပါ။ မူရငျးဇာတျလမျးမှာ စုနျးမကွီးဟာ Rapunzel နဲ့ မငျးသားအကွောငျးသိသှားတဲ့ အခါမှာ Rapunzel ရဲ့ ဆံပငျတှအေားလုံးကို ညှပျပဈပွီး ပွတငျးဝမှာ တနျးလနျးခထြားပါတယျ။ မငျးသားက အမှတျမထငျ ဆှဲလိုကျမိတဲ့အခါမှာ ဆံပငျတှနေဲ့အတူ ဆူးပုံပျေါ ခွခြေျောကပြွီး မကျြလုံးကှယျသှားပါတယျ။ အဲ့ဒါကိုမှ Rapunzel က မကျြရညျတှနေဲ့ ကုသပေးခဲ့တာပါ။
Little Mermaid ဆိုတဲ့ကားကတော့ Hans Christian Andersen ဆိုတဲ့ စာအုပျထဲက ပုံပွငျပါ။ ကားထဲမှာ ရသေူမလေးက သူ့ခဈြသူမငျးသားလေးနဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျဇာတျသိမျးသှားတယျလို့ ပါပါတယျ။ မူရငျးပုံပွငျမှာတော့ သူကယျခဲ့တဲ့ မငျးသားလေးဟာ အခွားမိနျးမတဈယောကျနဲ့ လကျထပျသှားပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျ ရသေူမလေးက အသဲကှဲပွီး သူ့ကိုယျသူ ပငျလယျထဲ မွှောနလေိုကျတာ နောကျဆုံး ပငျလယျရမွှေပျတှေ ဖွဈသှားတဲ့အထိပါပဲတဲ့။
Moana ဟာ Maui ဆိုတဲ့ ကောငျမလေး တဈယောကျကို အခွခေံထားတာပါ
Moana ဇတျကောငျကကတြော့ အပွငျမှာ Polynesia ဆိုတဲ့ မွို့ကို ဇာတျလမျးရေးသူရောကျသှားတုနျးက တှခေဲ့တဲ့ Maui ဆိုတဲ့ကောငျမလေးကို အခွခေံထားတာပါ။ အဲ့ဒီဇာတျလမျးမှာ Polynesian မြိုးနှယျတှရေဲ့ ဓလထေုံ့းတမျးတှအေကွောငျး တျောတျောမြားမြားထညျ့သှငျး ရေးဖှဲ့ထားပါသေးတယျ။
မူလနျဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သတျသခေဲ့တာပါ
သတ်တိရှိပွီး ရဲရငျ့တဲ့ တရုတျနိုငျငံရဲ့ စဈသူရဲကောငျးမလေး မူလနျရဲ့ ဇတျလမျးကို ကွညျပွီး ကြှနျတျောတို့တှေ စိတျခှနျအားတှေ တကျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မူလနျဇာတျလမျးရဲ့ ဗားရှငျးနောကျတဈခုမှာတော့ မူလနျဟာ နောကျဆုံး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သတျသသှေားလသေတညျးလို့ ဆုံးသှားပါတယျ။ ဆယျနှဈဆယျမိုး စဈထှကျပွီး မူလနျ ပွနျရောကျလာခြိနျမှာတော့ သူ့အဖကေလညျးသေ၊ သူတို့မိသားစုကလညျးကှဲ၊ နောကျဆုံး အထီးကနျြမှုဝဒေနာနဲ့ သူ့ကိုယျသူအပွဈတငျခွငျးတှကေို မရပျတနျ့နိုငျလို့ မူလနျဟာ ကျိုယျ့ကိုယျကိုယျသတျသသှေားပါတယျတဲ့။
Snow White ကားထဲက စုနျးမကွီးဟာ ထိုကျသငျ့တဲ့ ပွဈဒဏျခံခဲ့ရပါတယျ
Snow White ပုံပွငျဇာတျလမျးထဲမှာ စုနျးမကွီးဟာ ကြောကျတုံးပိသသှေားတာဖွဈပမေယျ့ မူရငျးဇာတျလမျးမှာတော့ မငျးသားလေးနဲ့ snow white တို့ရဲ့ မင်ျဂလာပှဲကို ရောကျလာတဲ့ စုနျးမကွီးကို မငျးသားလေးက ပူနတေဲ့ သံဖိနပျကွီး ၀တျခိုငျးပွီးတော့ မသမေခငျြး ကခိုငျးခဲ့တာပါ။
Elsa ဟာ လူကောငျးတဈယောကျ မဟုတျပါဘူး
Frozen ရဲ့ဇာတျလမျးကလညျး Hans Christian Andersen ရေးတဲ့ နတျသမီးပုံပွငျမြားကို အခွခေံထားတာပါ။ Disney က ရုပျရှငျထဲမှာ Elsa ကခဈြဖို့ကောငျးပမေယျ့ မူရငျးဇာတျလမျးထဲမှာတော့ စုနျးမကွီးပါ။ သူဟာ သူ့ကိုယျပိုငျ ရခေဲနနျးတျောထဲမှာ အထီးကနျြစှာ နရေငျး Kay ဆိုတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျကို ပွနျပေးဆှဲပွီး ဖမျးထားခဲ့ပါတယျ။ Kay ရဲ့သူငယျခငျြး Gerda က Kay စုနျးမကွီး လကျထဲကနေ စှနျ့စှနျ့စားစား ပွနျကယျရတဲ့ ဇာတျလမျးလေးပါ။
“Beauty and the Beast” ဟာ ဖွဈရပျမှနျ ပွငျသဈဇာတျလမျးပါ။o
Beauty and the Beast မူရငျးဇာတျလမျးကို Gabrielle-Suzanne de Villeneuve ရေးခဲ့တာပါ။ သူဟာ အဲ့ဒီဇာတျလမျးကို Pedro နဲ့ Catherine ဆိုတဲ့ အပွငျမှာတဈကယျရှိတဲ့ လငျမယားနှဈယောကျကို အခွခေံရေးဖှဲ့ထားတာပါ။ လကျတှဘေ့ဝမှာ ခငျပှနျးဖွဈသူ Pedro ဟာ ရှားပါးအရပွေားရောဂါတဈမြိုးရပွီး တဈကိုယျလုံး အမှေးတှေ နရောလပျမကနျြအောငျ ပေါကျနသေူပါ။ မိနျးမဖွဈသူ Catherine ကတော့ ခြောမောပွီး လကျမထပျခငျအထိ သူ့ယောကျြားဟာ အဲ့ဒီလိုလူမြိုးဆိုတာ မသိပါဘူး။ Disney ဇာတျလမျးထဲမှာ ပြျောပြျောရှငျရှငျပေါငျးဖကျကွလသေတညျးပါပွီး လကျတှမှေ့ာလညျး ကလေး ရ ယောကျအထိ ရသှားတယျဆိုတော့ ပုံပွငျနဲ့ လကျတှေ့ သိပျမကှာဘူးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
Sleeping Beauty ဆူးဆူးရခွငျး အကွောငျးအရငျး
Sleeping Beauty ဇာတျလမျးကတော့ ၁၆ ရာစုနှဈကတညျးက ပျေါပေါကျခဲ့တာပါ။ Disney ရဲ့ ဇာတျလမျးထဲမှာတော့ မငျးသမီးလေး Zellandine က မငျးသား Troylus နဲ့ ခဈြကွိုကျခဲ့ပွီး စုနျးမကွီးရဲ့ ဆူးတှကွေောငျ့ အိပျပြျောသှားခဲ့ပါတယျ။ မူရငျးဇာတျလမျးထဲမှာတော့ Zellandine က ကိုယျဝနျရပွီး ကလေးမှေးလိုကျပါသေးတယျ။ သူမှေးတဲ့ ကလေးက ဆူးကို ရှာတှသှေ့ားတာဖွဈပွီး အဲ့ဒီဆူးနဲ့ ထိမိလို့ အိပျပြျောသှားတာပါ။
9.Pocahontas ဟာ John Smith နဲ့ ဘယျတုနျးကမှ မခဈြကွိုကျခဲ့ပါဘူး
Pocahontas ဆိုတဲ့ ဇာတျကောငျက 1595 ခုနှဈမှာမှေးတဲ့ တကယျ့ဇာတျဆောငျပျေါမှာအခွခေံထားတာပါ။ Disney ဇာတျလမျးထဲမှာ Pocahontas ဟာ အင်ျဂလိပျ သင်ျဘောသား John Smith နဲ့ ခဈြကွိုကျခဲ့ပမေယျ့ လကျတှမှေ့ာ သမီးရညျးစားတှေ မဖွဈခဲ့ပါဘူး။ Pocahontas ဟာ အင်ျဂလိပျ စဈသားတှရေဲ့ ပွနျပေးဆှဲခွငျးကို ခံခဲ့ရပွီး အသကျ ၂၁ နှဈမှာပဲ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါတယျ။
ကိုယ်တွေထက်တောင် ပို့စ်ပေးလန်းတဲ့ ချစ်စရာတိရစ္ဆာန်လေးတွေ
ကိုယ်တွေထက်တောင် ပို့စ်ပေးလန်းတဲ့ ချစ်စရာတိရစ္ဆာန်လေးတွေ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် သဘာဝဆန်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျရင် မထင်မှတ်ထားတဲ့ ရယ်စရာဟာသပုံလေးတွေ ရိုက်မိသွားတတ်တယ်။ မြင်တာနဲ့သင့်စိတ်ကိုကြည်နူးစေမယ့် ချစ်စရာတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။. စမီးလှလား …. ၂။ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ အပြင်လိုက်မပို့ပေးဘူးလို့ပြောတယ်နော်…အဲ့ရှုပ်တဲ့အလုပ်ကို သားရှင်းလိုက်ပြီ.. ၃။.သားအကျီ င်္ မိုက်လား ၄။ …
ပါးစပ်​အ​ဟောင်းသားဖြစ်​ရ​လောက်​တဲ့ ​ရှေး​ဟောင်းသု​တေသနဆိုင်​ရာ ရှာ​ဖွေ​တွေ့ရှိမှု​တွေ သမိုင်းဆိုတာ ထူးဆန်းအံ့သြစရာ​တွေနဲ့ တကယ်​ပ​ဟေဠိပါ။ ​အ​ဖြေထုတ်​စရာ သမိုင်းဖြစ်​ရပ်​​တွေလည်း များစွာရှိ​သေးသလို ​ရှာ​ဖွေ့​တွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်​တဲ့ ​ရှေး​ဟောင်းသု​တေသနဆိုင်​ရာ ​တွေ့ရှိမှု​တွေလည်း များစွာရှိပါတယ်​။ ကြည့်​ကြရ​အောင်​လား။ ဂြိုဟ်​သားပုံစံဦးခွံ​တွေ မက္ကဆီကိုက သင်္ချိုင်းစုကြီးတခုထဲမှာ ပုံပန်းပျက်​ယွင်း​နေတဲ့ လူ့ဦး​ခေါ်င်းခွံ​ ၂၅ ခု ရှာ​တွေ့ခဲ့ပါတယ်​။ တူးယူ​နေတဲ့အချိန်​မှာ ရှည်​​မျော​မျောသဏ္ဍန်​ဦးခွံပုံစံ​ကြောင့်​ စိတ်​ဝင်​တစားရှိခဲ့တာမှာ …
သိပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ အင်္ဂလန်ကChris Porszလို့ခေါ်တဲ့Street Photographerတစ်ယောက်ဟာ 1970နဲ့80ကြားကာလတွေမှာ လမ်းမပေါ်ကဘဝပေါင်းများစွာသာမက အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ အများသူငါမျက်စိတွေကိုဖမ်းစားဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံများစွာကို ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သိပ်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော့ ဒီဓာတ်ပုံဆရာဟာ သူလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်(30)ကရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ဓာတ်ပုံထဲကလူတွေနဲ့အတူ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်(30)ဓာတ်ပုံထဲကနောက်ခံမြင်ကွင်းတွေအတိုင်း မလွဲမသွေပြန်ရိုက်ပြီးဖန်တီးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။သိပ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလေးပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲ ဓာတ်ပုံထဲကသူတွေကိုခြေရာခံပြီး ဒီသိပ်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုကိုချပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ။ (1).Railway Kiss(1980 & 2009) 1980တုန်းကတော့ Tonyနဲ့Sallyဆိုတာ Essexမှာအလုပ်လုပ်လုပ်တဲ့ 22နှစ်အရွယ်ကျောင်းဆရာလေးနဲ့အစိုးရရုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့21နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးပေါ့။ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်အကြာမှာ သူတို့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီစုံတွဲဟာ …